खै कोरोना ? महानगरको टिकटले खायो !Gandaki Press
खै कोरोना ? महानगरको टिकटले खायो !
प्रशासनको अनुमति विना पोखरामा हुन्छन् कार्यक्रम !
भदौ ७, २०७८ १४:३७ मा प्रकाशित
पोखरा, ७ भदौ । कोरोना महामारीको समयमा समेत पोखरा महानगरपालिकाले टिकट काटेरै शहिद पार्क खुल्ला गरेको छ । आइतबार जनैपूर्णिमाका दिन महानगरद्दारा निर्मित राष्ट्रिय विभुति तथा शहिद पार्क खुल्ला गरिएको हो ।
टिकट काउन्टरमा बसेका केशवले आफूहरुलाई कसैले केही नभनेको बताए । उनले विहानै देखि नै पार्कमा आउनेको भीड निकै रहेको बताए ।
यस्तै संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा शनिवार पोखरा रंगशालामा खेलकुद निकायबाट निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्दै एक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । महानगरले टिकट काटेर कोरोनालाई निम्ता दिइरहेको देखिएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति, गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद, कास्की जिल्ला खेलकुद विकास समिति तथा पोखरा महानगर खेलकुद विकास समितिको संयुक्त आयोजनामा स्वागत, बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएका कारण जिल्ला प्रशासनले कार्यक्रम वा मानिस भेला हुन, भीडभाड गर्न निषेध गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनलाई जानकारी विनानै राज्य निकायबाटै निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन भएको हो ।
खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका खेल परिषद् तथा समितिहरुले संयुक्त रुपमा पोखरामा बन्द प्रशिक्षण गरिरहेका राष्ट्रिय फुटबल टोली तथा अफिसियललाई स्वागतका साथै प्रदेश खेलकुद परिषद् उपाध्यक्ष ध्वज कुमार गुरुङ बधाई तथा शुभकामना दिएका थिए ।
यति ठुलो कार्यक्रम हुदाँ समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मौन देखिएको छ । कास्कीमा निषेधाज्ञा जारी रहेपनि संक्रमणबाट जोगिन राज्य तह र सामाजिक संघसंस्थाबाटै उल्लङघन हुदैँ आएको पाइन्छ ।
सोही दिन गण्डकी प्रदेशका कानून, संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दु कुमार थापाले समेत निषेधाज्ञाकै उल्लङ्घन गर्दै पोखरा ३३ भरतपोखरीको एक कार्यक्रममा युवाहरुलाई १५ थान भलिबल र जाली हस्तान्तरण गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले गैरजिम्मेवारी जवाफ दिदैं उम्किए । उनले पार्क खुल्ला भएको जानकारी पाउँदा समेत ‘आजलाई भयो भोली देखि बन्द गराउँला’ भन्दै तर्किए ।
उता पोखरा रंगशाला गतिविधिबारे आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘उहाँहरुले आफ्नै हिसावले कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो होला । प्रशासनसंग समन्वय भएको छैन ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता सुवास हमाललाई समेत निषेधाज्ञाको समयमा टिकट काटेर पार्क खुल्ला गरेको कुरा बारम्बार जानकारी गराउँदा समेत आफूले बुझ्ने भन्दै तर्किए ।
कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रिय खेलकुद परिष्द सदस्य राजेश गुरुङले खासै ठुलो कार्यक्रम नभएको बताए । तर खेलकुद अन्तर्गतकै ५ समितिले संयुक्त रुपमा गरेको कार्यक्रम कसरी सानो हुन्छ ? महामारीको समयमा समेत प्रशासनको निर्देशनलाई पाखा लगाउँदै कार्यक्रम गर्दा संक्रमण बढ्ने खतरा धेरै देखिन्छ ।
परिषद्का अर्का सदस्य सम्पन्न श्रेष्ठले महामारीको समयमा कार्यक्रम गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताए । ‘महामारीको समयमा देखावटी कार्यक्रम गर्न आवस्यक छैन् ।
खेलाडीका लागि प्रशिक्षण कसरी गराउने भन्ने सोच्नुपर्ने समयमा मानिस जम्मा गरेर कार्यक्रम गर्नु राम्रो होइन’ उनले भने,‘संक्रमण बढिरहेको छ । मृत्युदर पनि उत्तिकै बढेको छ ।
यस्तो बेलामा भड्किलो गरेर के हुन्छ ? उल्टै खेलाडीलाई संक्रमण बढ्ने जोखिम मात्र हो ।’ श्रेष्ठले प्रशासन भन्दा माथि उठेर कोहीपनि जान नहुने बताए ।
पोखरा महानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हेमन्त पौडेलले पोखरामा दैनिक २ सय देखि ३ सयको हारहारीमा संक्रमित बढिरहेको अवस्थामा कार्यक्रम गर्नु अनुचित रहेको बताए ।
‘पोखरा कोरोनाको केन्द्र विन्दु बन्दै गएको छ । प्रदेशभरका विरामीमात्र नभई अन्य जिल्लाका समेत आउने यहिँ हो । त्यसैलेपनि यहाँ संक्रमित ह्वात्तै बढिरहेका छन् । यस्तो समयमा कार्यक्रम हुनु राम्रो कुरा होइन’ उनले भने ।
कोरोना संक्रमण दर बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले सवारीमा जोरविजोर प्रणाली सहित विहिवार राती १२ बजेदेखि लागु हुनेगरी एक हप्ताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
जिल्ला कोभिड–१९ व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार कास्की जिल्लाभर लागु हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८, संक्रामक रोग ऐन २०२०, कोभिड संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ एवम् अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने भनिएपनि कार्यान्वयन भने भएको देखिदैन ।
यद्यपी आम सर्वसाधारणलाई भने कारबाही हुने गरेको छ ।